Warshadda Marble iyo Warshaddii Cayayaanka - Shirkadaha Shiinaha ee Marble Mortar iyo Beeraleyda Beeraleyda ah, Bixiyeyaasha
• Waxaa laga sameeyay marble qaab iyo cimri dherer
• Ku habboon in loo tolo pestos, qorfe, toon ah, nuts iyo inbadan
• Marble wuxuu isku daraa muuqaalka rustic-chic iyo waxqabadka adag
• Dusha sare gudaha ah ee loogu talagalay waxtarka guud ee labada isku darka qallalan iyo qoyanba. Cayayaanka oo la miiray oo leh qaab aan la shaacin oo loogu talo galay waxqabadka
Sharaxaadda Alaabta: WB 187 Maaddada: Marble dabiiciga ah Cabbirka: Dia.13cm, Dhererka 9cm Xidhmada: sanduuqa hadiyadda ama sanduuqa bunni ee laga sameeyay marballadda loogu talagalay qaab dhismeedka iyo cimri dhererka ugu habboon ee loo shiiday pestos, qorfe, toonnada, miraha iyo inbadan oo Marble ah ayaa isku daraya muuqaalka maandooriyaha-chic-chic dusha sare ee jilitaanka Gudaha dusha sare ee loogu talagalay waxtarka guud ee labada isku darka qallalan iyo qoyan labadaba. Cayayaanka oo la miiray oo leh qaab aan la shaacin oo loogu talo galay waxqabadka
Qalabka: marbillada dabiiciga ah Cabbirka: dia.13cm, dhererka 8cm xirid: sanduuq hadiyad ama sanduuq bunni ah Marble Mortar iyo Cayayaanka • Dhamaad oo loo burburiyo dhir udgoon dhan iyo sameynta waxyaabaha isku darka. • Waxay ku habboontahay iskudhafka iyo u adeegida guacamole — ama samaynta pesto iyo suugada kale ee rustic. • Saf la gali caleemo salaar si aad u isticmaasho baaquli ujeedo ujeedo leh. • Dhacdooyinka gudaha ee jilicsan ee hoobiye ayaa ka caawiya burburin iyo shiidi weelka. • Cayayaanka culus wuxuu kuu shaqeyaa adiga, oo hubinaya in si hufan leh u shiidid, qumbaha iyo qasitaanka.